Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba » Ukuya kutsho kwi-100 abantu aboyikayo ukuba bavaleleke kwiimfumba zodaka zaseKhanada
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukuya kutsho kwi-100 abantu aboyika ukuba bavaleleke kukhukuliseko lomhlaba eKhanada.
Amagosa ohlangulo olungxamisekileyo athi kufutshane neenqwelo ezingama-50 ezivaleleke phakathi kwamabala enkunkuma kuhola wendlela, malunga nabantu ababini ukuya kwabathathu kwindawo nganye.
Ukudilika komhlaba kwiBritish Columbia yaseKhanada kwalandela ngaphezu kosuku lwezandyondyo zemvula.
Abasebenzi bokukhangela kunye nabahlanguli bebesazama ukuvavanya umonakalo owenziwe kukudilika komhlaba ngoMvulo.
Amagosa ayengekaqiniseki ukuba kukho abanye abantu abalahlekileyo kunye nezithuthi.
Ukudilika komhlaba okukhulu kwabetha uhola we-7 kufutshane nedolophu encinci yaseAgassiz kumazantsi eCanada. British Columbia kwiphondo, kulandela ngaphezu kosuku lwezandyondyo zemvula.
Ubuncinci abantu abayi-100 boyikwa ukuba bavaleleke ngobusuku phakathi kobutyobo kuhola wendlela waseKhanada emva kweemvula ezingayekiyo ezibangele izikhukula kunye nodaka izolo. Iinzame zokuhlangula zaziza kuqala emva kokusa.
Ngokwamagosa ohlangulo olungxamisekileyo eKhanada, bekukho malunga neenqwelo ezingama-50 ezivaleleke phakathi kwamasimi amabini enkunkuma kuhola wendlela. British Columbia, malunga nabantu ababini ukuya kwabathathu kwindawo nganye.
Abasebenzi bokukhangela nohlangulo bebesazama ukujonga umonakalo obangelwe kukudilika komhlaba ngoMvulo – kunye nabephondo. UPhando olunzima lweDolophu kunye noHlangulo (HUSAR) Iqela labasebenzi elidiza ukuba alikwazanga ukufumana umbono opheleleyo ngale meko ngobusuku nje obunye.
"Into eyenza nzima le meko kukuba sinezilayidi ezibini kuHola we-7 kwaye sinabantu ababevaleleke kwinkunkuma ... kwaye abanye baye bahlangulwa," utshilo uMlawuli weQela le-HUSAR uDavid Boone.
Wongeze ngelithi isebe lomlilo kule dolophu sele likhuphe abantu abayi-12 ababevaleleke kwiimoto zabo, ngelixa abanye abantu ababini bahlangulwe kwenye indawo.
Ephawula ukuba amagosa akaqinisekanga ukuba bakhona abanye abantu abalahlekileyo kunye nezithuthi, uBoone wathi abasemagunyeni "babengaboni ngasonye kuyo yonke ingxaki." Ukongeza kokunqongophala kokukhanya, ukuzinza komhlaba kunye nemiba ejikeleze iintambo zombane nazo zinzima iinzame zokuhlangula. Uvavanyo olongezelelweyo malunga "nezona ndawo zibalaseleyo zokufikelela" kwiqela kuya kufuneka zilinde kude kube semini, wongeze watsho.
Ngokweengxelo ezithile zemfonomfono zabaqhubi, “eneneni babeva ukukhwaza nokukhwaza becela uncedo,” bebonisa ukuba “mhlawumbi kukho malunga nama-200, 300 eemoto ezamisayo, zilindele uhlobo oluthile lohlaziyo.”